Forex ရောင်းဝယ်သူများ လုပ်မိလေ့ရှိသောအမှားများ
"လူမိုက်တွေသာ သူတို့ရဲ့အမှားတွေကနေ သင်ယူပြီး၊ ပညာရှိများကတော့ သူတစ်ပါးရဲ့အမှားတွေကနေ သင်ယူပါတယ်။" သင်ဒီဆိုရိုးစကားကို ကြားဖူးလား?
ရောင်းဝယ်သူတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အများဆုံးအမှားတွေကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှားတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီး၊ သူတစ်ပါးရဲ့ အမှားတွေကနေ သင်ယူပါ!
"စီစဉ်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ကျရှုံးရန် ပြင်ထားပါ"
အစီအစဉ်မရှိဘဲ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြောပြမယ်: အစီအစဉ်မရှိဘဲ ရောင်းဝယ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အရောင်းအ၀ယ်အစီအစဉ်တစ်ခုသည် သင့်အရောင်းအ၀ယ်ဗျူဟာနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဗျူဟာများပါဝင်သော စည်းကမ်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်တစ်ခုဟာ အရောင်းအ၀ယ်ထဲ ဘယ်ချိန်ဝင်မလဲ၊ မအောင်မြင်တဲ့ အရောင်းအ၀ယ်ကနေ ဘယ်လိုထွက်မလဲ၊ သင့်ပစ်မှတ်ရောက်ရှိရန် အချိန်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိတဲ့ ငွေပမာဏတွေကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အကူအညီပေးပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုဗဟုသုတမရှိရင် သေချာပေါက်သင်ရှုံးလိမ့်မည်။
Stop Loss မရှိခြင်း
သင်တွက်ထားတဲ့အမြတ်ကို ၁၀၀%သေချာတယ်ဆိုရင်တောင်မှ Stop Loss သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ Forexဈေးကွက်က လှုပ်ရှားမှုကြမ်းပြီး၊ အရေးကြီးသတင်းတွေက အရောင်းအ၀ယ်အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅တွင် ဆွစ်ဇာလန်ဗဟိုဘဏ်သည် ယူရိုကိုဆန့်ကျင်ပြီး ဆွစ် ဖရန့်အပေါ် ရုတ်တရက်အတိုးနှုန်းစွန့်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက် EUR/CHF ၃၀%ထိ ကျသွားခဲ့သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်က လူတိုင်းကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ Stop Loss မသတ်မှတ်ထားတဲ့ ရောင်းဝယ်သူများဟာ ကြီးမားတဲ့အရှုံးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ သင့်မှာ Stop Loss မရှိလျှင် အပျက်အစီးဖြစ်သွားစေနိုင်မည့် အပြောင်းအလဲခဏလေးကို လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အမြတ်မရသော အရောင်းအ၀ယ်ကို ထပ်ဖြည့်ခြင်း
တစ်ခါတလေမှာ ရောင်းဝယ်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အရောင်းအ၀ယ်ပစ်မှတ်ကို သေချာလွန်းလို့ အမှန်ကိုတောင်မမြင်နိုင်ကြပါဘူး။ အ၀ယ်အော်ဒါတစ်ခုဖွင့်ထားပြီး ဈေးကွက်ထိုးကျသွားတယ်လို့ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ သို့သော်လည်း ဈေးပြန်တက်လိမ့်မည်လို့မျှော်လင့်ပြီး သင့်အော်ဒါအရွယ်အစားတိုးလိုက်တာဟာ သင့်အနေနဲ့ သင့်လုပ်ရပ်မှန်တယ်လို့ လုံးဝသေချာနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ အရှုံးတွေပိုများလာပါတယ်။ သင့်မှာ အဖွင့်အော်ဒါတစ်ခုရှိနေရင် မျှတတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမလုပ်နိုင်တော့ဘဲ သင့်အပြုအမူတွေဟာလဲ ပရမ်းပတာဖြစ်လာပါတော့မယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ရှုံးနေတဲ့အရောင်းအ၀ယ်မှာ ထပ်မထည့်ပါနဲ့။
အမြတ်မရတဲ့အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း ရောင်းဝယ်သူက အော်ဒါကို အရှုံးနဲ့မပိတ်သွားအောင် Stop Lossတိုးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကနဦးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင်ပါ။ မဟုတ်ရင် အရှုံးတွေပိုကြီးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရောင်းအ၀ယ်ပိတ်တဲ့အခါကျမှ ဘာကမှားသွားလဲဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ပါ။ ဒီအရောင်းအ၀ယ်ကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး၊ နောက်တစ်ခါကျရင်ပိုကောင်းတဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်အောင် ဒီအတွေ့အကြုံကို အသုံးချပါ။
ရှုံးနိုင်ခြေများကို စီမံခြင်းမရှိတဲ့ ရောင်းဝယ်သူဟာ၊ အရာအားလုံး ဆုံးရှုံးတာပါပဲ။ ရောင်းဝယ်သူတွေဟာ အမြတ်အကြောင်းပဲ တွေးနေလို့မရပါဘူး။ တစ်နေ့တာ အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုမှာ ငွေဘယ်လောက်စွန့်စားလိုက်မလဲဆိုတာလဲ ထည့်တွက်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရှုံးတွေကို ကန့်သတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဈေးကွက်မှာကြာကြာနေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ၀င်ငွေပိုရဖို့ အခွင့်အရေးပိုရှိလာနိုင်ပါတယ်။ စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာပါ: အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုလျှင် ၁%သာစွန့်စားပါ။ ဘယ်အရာကမှ ဒီစည်းမျဉ်းကနေ သင့်ကိုအာရုံမလွှဲပါစေနဲ့။
သေချာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဒေတာထုတ်ပြန်ချက်တွေက Forex ဈေးကွက်ကို သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ ရောင်းဝယ်သူတိုင်းသိပါတယ်။ အမှန်တကယ်စီးပွားရေး အညွှန်းကိန်းတွေက ခန့်မှန်းထားတဲ့အဆင့်နဲ့ကွဲပြားနေခဲ့ရင်၊ ငွေကြေးအတွဲတွေ လှုပ်ရှားမှုကြမ်းနိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ရောင်းဝယ်သူအားလုံး သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီး မရောင်းဝယ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှ သတင်းတွေကို ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အရောင်းအ၀ယ် စီမံကိန်းချတဲ့အခါ သတင်းတွေကို လစ်လျူရှုခြင်းဟာ အလွယ်တကူရှောင်လွှဲလို့ရတဲ့ အမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန်မှ အကြံဥာဏ်ရယူပါ။
အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေတဲ့ အတွဲများကို ရောင်းဝယ်ခြင်း
ကုန်သည်များက တစ်နေ့စာအရောင်းအ၀ယ်များစွာလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့် တော်တော်များများက ငွေကြေးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိကြပါဘူး။ တစ်ခုထက်ပိုသောအတွဲများမှာ ငွေရနိုင်မည့်အခွင့်ကောင်းတွေရှိပုံပေါ်ပေမယ့် သတိထားပါ: အတွဲအများစုမှာ တူညီတဲ့အရောင်းအ၀ယ်ပြင်ဆင်မှုတွေ့ရင် သူတို့အချင်းချင်းဆက်စပ်မှုရှိပုံရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီငွေကြေးအားလုံးကို တချိန်တည်းမှာ နိုင် (သို့) ရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ USD/CHF နှင့် USD/JPY တို့မှာသိသာထင်ရှားတဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်: ပထမတစ်ခုတက်သွားတာနဲ့ ဒုတိယတစ်ခုလဲ အားကောင်းလာနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတွဲနှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်းဝယ်လိုက်ခြင်းက သင့်စွန့်စားမှုကို နှစ်ဆတိုးလိုက်တာပါပဲ။
အရှုံးဟာ လူတိုင်းအတွက်ခက်ခဲပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူသစ်တွေအတွက်ပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ ဈေးကွက်မှာ လက်စားချေဖို့ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် လက်စားချေတဲ့အရောင်းအ၀ယ်များဟာ ယခင်ရှုံးသွားတဲ့အရောင်းအ၀ယ်ထက် ၂-၃ဆ ပိုကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ပိုပြီးတောင်ရှုံးကြပါသေးတယ်။ အရှုံးတွေကို ရှောင်လွှဲမရပါဘူး။ သင့်အားအင်တွေကို လက်စားချေတဲ့အရောင်းအ၀ယ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲ မအောင်မြင်တဲ့အရောင်းအ၀ယ်ကိုပြန်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ အာရုံထားပြီး၊ အနာဂတ်မှာ တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
သင်ယူလေ့လာမှုမရှိခြင်းက အရောင်းအ၀ယ်ကို မမြင်တတ်ဘဲ၊ အရှုံးတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ
နိဂုံးချုပ်ရသော်၊ ရောင်းဝယ်နေစဉ်အတွင်း မတူညီတဲ့အမှားတွေလုပ်မိမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်: ဘာမှမလုပ်ရင် အမှားလဲ မလုပ်မိတော့ပါဘူးတဲ့။ သို့သော်လည်း ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်မိလေ့ရှိတဲ့အမှားတွေကို ရှောင်မယ်ဆိုရင် သင့်အရောင်းအဝယ်ဟာ ပိုပြီးမြန်မြန်အောင်မြင်လာမှာပါ။
ပညာရေး လူသစ်များ လှုံ့ဆော်မှု